Umntla we-ridge chalet-Potato lake w / Ichibi langaphakathi - I-Airbnb
Umntla we-ridge chalet-Potato lake w / Ichibi langaphakathi
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMelody
Ujonge i-chalet enomtsalane kwi-Potato Lake (2,100 yeehektare) ePark Rapids, MN. Le yindawo yokuphumla yosapho egqibeleleyo enazo zonke izibonelelo zendawo ekuchithelwa kuyo iiholide edityaniswe nazo. Kubandakanya ichibi langaphakathi lonyaka wonke, i-sauna, ulwandle olunesanti enendawo yomthi enomthunzi kunye nokutyibilika ukupaka isikhephe sakho. Yonwabela iphenyane elikhoyo kunye neekayaks, ukuloba, intenetya, ibhola yevoli, ukuhamba ngekhephu nokunye. Ikhabhinethi ijonge echibini kunye nokuhamba imizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni. Ifakwe kufutshane ne-Itaska kunye noPaul Bunyan State Parks & Trails.
Ukufikelela kwi-Intanethi okungenamkhawulo kubandakanyiwe. Uyakonwabela uxolo lwethu lwesiqhelo, lonke ixesha ikhabhathi enesilingi eziphakamileyo, ukukhanya okuhle kwendalo kunye nepatio ejonge kwiChibi lePotato eneGazebo, itafile, izitulo, kunye nomngxuma womlilo wenkampu. Ikhabhinethi yethu ayikho ngaphambili elunxwemeni, kodwa ijonge echibini kunye neepayini. Idityaniswe elunxwemeni lokuzonwabisa lwasehlotyeni kunye nokuloba ebusika / i-snowmobiling / sking. Phuma nje ngomnyango wehle induli okanye uqhube umzuzu kwaye ulapho elunxwemeni ecaleni kwesiliphu sakho sedokhi okanye indlu yeentlanzi. Iikayak kunye namaPhenyana ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe. Imali encinci ye-paddleboat. Kubazingeli le ndlwana ibekwe ngaphakathi kweekhilomitha ezili-10 zamawaka eehektare zesiphaluka kunye nomhlaba welizwe. Ukuhamba ngekhephu okungapheliyo (ekunene ukusuka kwikhabhathi yakho) kunye nokutyibiliza ekhephini, amavili ama-4 kunye neendlela zokukhwela ihashe kwimizuzu emi-5 kuphela. I-Itaska State Park (isango loMlambo i-Mississippi) kunye ne-Paul Bunyan Forest State Park kunye neendlela zijikeleze i-18 yeemayile kude. Ngaphakathi kweemayile ezisi-8 yiCampu yokuLoga, iSifundo soMngeni weCharacter enezipline, iEvergreen Gift kunye nePaki yolonwabo, indawo yokungena yeHeartland Park & Trails, iHeadwaters & Eagle View Golf Courses kunye neendawo zokutyela ezininzi ezinomgangatho wokutyela & neentsapho ezinobuhlobo. Kukho iindawo ezintle zokuya kwiinyanga zasebusika ukutyibiliza kunye netyhubhu. Indawo yoLonwabo yaseShingobee kwi-Walker (Mahala ~ yizisa eyakho) DL okanye iBuena Vista Indawo yeSki eBemidji. GPS eminye imidla kwindawo yethu.
Kweyona ndawo intle yaseNorthwoods yaseMinnesota, ungqongwe yimipayina emide, imithi yebhitshi kunye nentaphane yamachibi. Indlwane yee-Eagles ikufuphi nendawo, ngoko ke ukubonakala kokhozi kuxhaphake kakhulu kunye nexhama. Le khabhathi ibekwe kwindawo eselumelwaneni enemithi yezinye iichalet ezi-4 ezifanayo. Yiba namava okuphuma kwelanga okuhle okanye ubukele ukutshona kwelanga kunxweme lwesanti (inqaku) Yonwabela i-snapping campfire ngelixa umamele iifowuni ze-loon. Itasca State Park yi 18 yeemayile drive kude kwaye ubonisa ezininzi imiboniso yobomi bangaphambili & imyuziyam, iivenkile izipho kunye cafe okumnandi kunye ice cream, pizza, iisandwich gourmet njl ekunene emphethweni we Mississippi Heads. Ukuhenda yonke iminyaka ukuba ikhwele iibhayisekile kwaye uhambe ngaphesheya okanye untywilise iinzwane zakho kumanzi aqukuqelayo @ ekuqaleni komlambo iMississippi. Zama ukuba ungaphoswa yinqaba yomlilo xa uphuma. I-Park Rapids ikumgama oziikhilomitha ezi-8 kwaye inazo zonke iimfuno zakho zedolophu encinci, izipho kunye neendawo ezintle zokutya!
Uya kuba ne-chalet yonke kuwe! Kodwa ukuba ufuna nantoni na, sikude imizuzu emi-5 kwaye sinomdla wokunceda!